musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Indonesia Kuputsa Nhau » Unoda Bali Chikafu? Gamuchirai zvakare kuBali
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Culinary • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Indonesia Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • kutakura • Trending Now
Bali yakagadzirira kutenderera kwenyika dzese kana zviremera zvichipa mwenje wakasvibira.
Bali yakagadzirira uye izvi zvinoratidzwa neapp nyowani yakanzi Welcome Back kuBali. Ichi chishandiso chinopa vashanyi ruzivo rwechokwadi pane izvo zvinogoneka, uye chii chinofanirwa kudzivirirwa kana uchienda kuzvitsuwa zvaMwari.
Chitsuwa cheVamwari chiri kugadzirira kuvhurira vashanyi, asi iyo chaiyo nguva yacho ichiri kujeka.
The Bali Hotel Sangano nhasi vakokwa kumusangano wevatori venhau kuGrand Hyatt Hotel muNusa Dua.
Zvingave zvakasiyana sei muBali, danho rekutanga isinoshamisa yekudiridza mukanwa Bali Sustainable Chikafu Mutambo.
Iyo Bali Hotel Association nhasi yazivisa iyo "Welcome Back to Bali" App sechishandiso chekushanya kutangazve muIndonesian Island, inozivikanwa zvakare se Chitsuwa cheParadhiso.
Kubva pamakomo akaisvonaka kusvika kumahombekombe egungwa kune makomo anoputika kusvika kumahombekombe matema ane jecha, hazvishamise kuti Bali inozivikanwa seChitsuwa chevaMwari.
Inowanikwa pakati peJava neLombok chitsuwa, Bali ine tsika yakapfuma uye dzakasiyana dzakasarudzika.
"Bali hupenyu hwangu" - ichi chirevo chine simba chinoratidza chokwadi chekuti Bali haina kungofanana nechero nzvimbo yekushanya asi chitsuwa chakanaka chiri chavo uye chinogara nevaBalinese vanogamuchira vashanyi kuti vafarire chitsuwa ichi. Sechirevo ndechekunzwa, kutendeseka, uye ichokwadi, inokoka nyika kuti izive kuti nei Bali yakakosha kudaro.
Bali yakarohwa zvakanyanya neCOVID-19 uye nekuvharwa kweinokosha yekufambisa uye yekushanya indasitiri.
Vhiki rapfuura, Indonesia yakarerutsa zvirambidzo zveCOVID-19 pachitsuwa chakakurumbira chevashanyi cheBali, kunyangwe vafambi vekunze vachasangana nemitemo yakasimba pakusvika kuzobatsira kuparadzira kupararira kwemimwe misiyano, gurukota rakadaro nemusi weMuvhuro.
Nzvimbo dzevashanyi munzvimbo zhinji dzechitsuwa zvino dzichagamuchira vashanyi, gurukota rezvemakungwa uye rekudyara Luhut Panjaitan akaudza musangano chaiwo, chero bedzi vachitevedzera zvirevo zvakaomarara, sekuratidza chimiro chavo chekubaiwa nhomba pafoni-yakasimbiswa nharembozha.
Parizvino, Bali inoramba iri nzvimbo yekuenda kumusika wepamba, nekuti Den Pasar Airport haisati yazarukira kuuya kwevashanyi vekunze.
Sekureva kwenhengo yebhodhi yeHotel Association, nhengo dzeindasitiri yekufambisa neyekushanya muBali vanoramba vaine tarisiro uye vazere netariro nemufaro wekutangazve kufamba kwepasirese zvakare munguva pfupi.
Iyo Welcome Back App yakaunzwa nhasi ndeye-yekumira yakavimbika ruzivo sosi yevazororo kuronga uye kufamba nzendo muBali zvakachengeteka uye zvine mutsindo.
Iyo basa ndere kupa vese vashanyi uye vekushamwaridzana navo neruzivo rwakagadziridzwa uye rwechokwadi maererano nemamiriro ezvinhu ari kuchinja muBali.
Ruzivo rwunobva kunzvimbo dzepamutemo, dzakasimbiswa uye dzinoenderana nemamiriro azvino muBali.
Ruzivo pa Gamuchira Kudzoka KuBalindeyekubatsira vafambi kuenda kuBali kuti vatore zvisarudzo zvine ruzivo nezvekufamba kuenda kuBali uye kugara muBali. Izvi zvinosanganisira ruzivo munzvimbo yepamutemo yekuenda-yakatarwa yekufambisa mazano uye mazano akawandisa nezve mamiriro azvino maererano nezvirambidzo zvekufamba nendege uye matanho ari munzvimbo muBali.
Vafambi vese vanofanirwa kutora mutoro wezvavanofunga zvekufambisa kusanganisira kunzwisiswa neruzivo irworwo Gamuchira Kudzoka KuBali haina kuitirwa kuti ive, uye haifanire kuvimbwa nayo, sekutsiva mutemo kana rimwe zano rehunyanzvi. Vashandisi vanofanirwa kuwana chero rakakodzera zano rehunyanzvi rinoenderana nemamiriro avo chaiwo.
Nzvimbo iyi inotsigirwa uye inochengetwa neBali Hotels Association.
eTurboNews apinda musangano wenhau nhasi.
Dzvanya Musangano neBali Hotel Association.